Filtrer les éléments par date : vendredi, 27 septembre 2019
vendredi, 27 septembre 2019 22:15
Fitsaboana: Mikasa hiverina ny sambo hopitaly « Mercy Ships » amin’ny 2020
Nisy ny fihaonan’ny praiminisitra Ntsay Christian tamin’ireo tompon’andraikitry ny sambo hopitaly « Mercy Ships », omaly, tao New York. Efa misy fifanarahana mipetraka eo amin’i Madagasikara sy ity fikambanana ity, izay mikasa ny hampiantsona ny sambo ao Toamasina indray amin’ny taona ho avy, ka hohavaozina izany fifanarahana izany.
Maro ny Malagasy no hahazo fitsaboana amin’ny alalan’ny fandidiana, ary nambaran’ireo tompon’andraikitry ny « Mercy Ships » fa misy sampana iray nosokafana ao amin’ny hopitalin’i Toamasina, hahafahan’izy ireo manampy antsika eo amin’ny fandidiana marary.
Mikasa ny hametraka birao maharitra eto Madagasikara ny « Mercy Ships » ka hiarahana mandinika amin’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny sy ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny momba izany.
vendredi, 27 septembre 2019 22:04
Fambolena sy ny sakafo: Isan’ireo firenena telo hisitraka tetikasa vatsian’ny FAO vola 20 tapitrisa dolara i Madagasikara
Nihaona tamin’i Dongyu, Tale Jeneralin’ny FAO misahana ny fambolena sy ny sakafo, eo anivon’ny Firenena Mikambana ny praiminisitra Ntsay Christian, ny 26 septambra 2019. Hisitraka tetikasa iray vaovao vatsian’ny FAO vola mitentina 20 tapitrisa dolara, hampitomboana ny famokarana vary i Madagasikara. Firenena telo, dia i Sina, i Madagasikara, ary ny FAO no voakasik’ity tetikasa telo zoro ity.
Nodinihina ihany koa ny olana ateraky ny olitra eo amin’ny fambolena katsaka, sy ny ady amin’ny valala. Noresahina ny hifantohan’i Madagasikara kokoa amin’ny fampiasana masomboly nohatsaraina, eo amin’ny sehatry ny fambolena.
Nihaona tamin’ny Praiminisitra malagasy Ntsay Christian, tao New York, ny Filoham-pirenenan’i Irlandy, Michael D. Higgins. Maniry ny hanatsara ny fifandraisana ara-diplaomatika amin’i Madagasikara io firenena io, ary nomarihin’ny Praiminisitra fa ny masoivohon’i Irlandy ao Mozambika no miandraikitra ny fifandraisana amin’i Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Nojerena ny sehatra azo iaraha-miasa ka anisan’izany ny fampianarana sy ny fanofanana ara-teknika, ary ny fizahantany.
Hirotsaka hofidiana ho mpikambana amin’ny Sampana miandraikitra ny fandriampahalemana eo anivon’ny Firenena Mikambana amin’ny 2020 ihany koa i Irlandy ka nangataka ny fanohanan’i Madagasikara.
vendredi, 27 septembre 2019 21:47
Mahamanina-Fianarantsoa: Hisy EPP manarapenitra hahazaka mpianatra 600
Natomboka androany ny fanamboarana EPP manarapenitra eo Mahamanina Fianarantsoa. Nisantatra ny asa fanamboarana izany ny filoha Andry Rajoelina. Hisy efitra 12 ny fotodrafitrasa vaovao, ary hahazaka mpianatra eo amin’ny 600. Ahitana birao, toeram-pisakafoana, toerana famakiam-boky sy kianja filalaovan’ny ankizy.
Nampanantena ny Filoha Andry Rajoelina fa hahazo “tablette numérique” avokoa ireo mpianatra hianatra amin’ity EPP manarapenitra ity.
vendredi, 27 septembre 2019 21:34
Ambalakely- Fianarantsoa: Hisy fonja vaovao ato anatin’ny valo volana
Natao androany 27 septambra 2019 ny fametrahana ny vato fototry ny asa fanorenana fonja vaovao ao Volamena, Kaominina Ambalakely, Distrikan’i Lalangina, Faritra Matsiatra Ambony.
Hahazaka voafonja sivanjato ity fotodrafitr'asa vaovao ity. Haharitra valo volana ny asa fanamboarana, ary ho atao modely amin'ireo fonja rehetra izay ho hatsangana, araka ny nambaran'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, « hanalana ny laza ratsin'i Madagasikara mahakasika ny toeram-pamonjana ».
vendredi, 27 septembre 2019 21:20
Antananarivo Renivohitra: Mankalaza ny faha-20 taonany ny Polisy Monisipaly
20 taona nijoroana izao ny Polisy Monisipaly eto Antananarivo Renivohitra. Vavaka iraisam-pinoana tao amin’ny FJKM Mahamasina Atsimo no nanombohana ny fankalazana androany ary haharitra heritaona, ka tsy hifarana raha tsy amin’ny 27 septambra 2020. Marolafy ny hetsika hanamarihana ity faha-20 taonan’ny Polisy Monisipaly mandritra izay herintaona izay.
Miisa 258 ny Polisy Monisipaly miara-miasa ao amin’ny Kaominina Renivohitra Antananarivo, manao ho adidy ny fiantohana ny filaminana sy ny fampandrosoana ny tanànan’Antananarivo.
vendredi, 27 septembre 2019 20:42
Kitra - Tompodakan'i Afrika: TP Mazembe vs Fosa Juniors
Hiatrika ny lalao miverina amin’ny Tout Puissant Mazembe ny Fosa Junior ny tolakandron’ny alahady 29 septambra 2019 izao, lalao atao ao amin’ny Kianja Frédéric Kibassa Maliba any Repoblika Demokratikan’i Congo. Lalao miverina ifandonan’ny ekipa roa tonta io, tafiditra amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ireo ekipa tompondaka.
Nirava ady sahala samy tsy nitoko ny ekipa roa tonta nandritra ny lalao natao teo amin’ny Kianja Rabemananjara – Mahajanga tamin’ny 15 septambra 2019.
vendredi, 27 septembre 2019 20:17
Bakalôrea 2019: 26 291 ny isan’ny mpiadina manerana ny faritanin’i Toamasina
Hanomboka amin’ny alatsinainy 30 septambra 2019 ny fanadinana bakalôrea. Miisa 26 291 ireo mpiadina voasoratra anarana manerana ny faritanin’i Toamasina, ka amin’ny sokajy ankapobeny ny 25 087 amin’ireo ary 1 204 ny mpiadina bakalôrea teknika.
11 taona, mpianatra ao Tanambe Ambatondrazana, no zandriolona indrindra amin’ireo mpiadina. Sokajy A2 no misy azy, ary 72 taona, sokajy A1, ny zokiolona indrindra amin’ireo mpiadina ato amin’ny Faritanin’i Toamasina, ary avy any Maroentsetra.
Nisy fihenany miohatra ny tamin’ny taon-dasa, latsaka 2 000, ny isan’ny mpiadina tamin'ity taona ity, izay tsy mazava ny antony.
Nametraka fepetra ny fiadidiana ny oniversiten’i Toamasina tamin'ity taona ity noho ireo zava-nisy sy tratra ny taona lasa, fa tsy maintsy mamoaka sofina avokoa ao anaty trano fanadinana ireo vehivavy misarom-boaly rehetra, ny tsy fanarahana izany dia mitarika amin’ny tsy fahafahana manao fanadinana.
vendredi, 27 septembre 2019 20:14
Fandriampahalemana: Zandary 95 no lavo amperin’asa tamin’ny fifanandrinana tamin’ny dahalo
Nitondra fanazavana ny avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena mandiso ny tatitra nataon’ny ONG iray tany amin’ny fivoriambe faha-42 ny Filankevitry ny zon’olombelona any Genève tamin’ny 19 septambra 2019, miampanga ny Zandarimaria ho mpamono olona tsy mandalo fitsarana sy manao izay hahaleo monina ny Malagasy any atsimon’i Madagasikara, indrindra tao amin’ny Distrikan’i Betroka. Raha ny fitorohana dia mpiompy omby 4 000 eo no namoronana heloka ka maty novonoin’ny Zandary hatramin’ny taona 2012 no mankaty.
Nandroso ny antotanisa teo aminy ny Zandarimariam-pirenena milaza fa 4 403 ny isan’ny sivily Malagasy maty nanerana ny Nosy hatramin’ny 2013 no mankaty, vokatry ny fanafihan-dahalo, tsy araka ny tatitra nataon’ilay ONG, ary maty novonoin’ny dahalo mpangalatra omby ny 1 291 tamin’ireo namoy ny ainy ireo.
vendredi, 27 septembre 2019 16:26
Morondava: Maresaka ny tanàna
Nisokatra omaly 26 septambra 2019 ny « Foara Renala » andiany faha-5 sy ny « Festival Rifatse ». Karnavaly no nanokafana ny hetsika. Maresaka eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe.